သီအိုရီကို ဗဟိုပြုထားသော သင်ကြားမှုမျိုးထက် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်သော ဝိညာဉ် ဘ၀အသက်တာကို
အခြေပြုပြီး စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကို သင်ကြားပေးမည့်
ယနေ့ခေတ်နည်းပညာသည် ကမ္ဘာတစ်၀န်းမှာရှိသော လူသားများအတွက် သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှ ကို အချိန်နေရာဒေသမရွေး ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ နိုင်ငံတကာ နေရာဒေသအသီးသီးမှ သမ္မာကျမ်း စာလေ့လာသင်ယူလိုသူများအတွက် Onlineမှ တစ်ဆင့် သမ္မာကျမ်းစာကို နည်းစနစ်တကျ လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် Good News Theology ကျမ်းစာသင်ကျောင်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ဘာကြောင့် အွန်လိုင်း Good NewsTheology ဟုခေါ်ရသနည်း။?
Online မှ သင်ကြားပေးသည့် အစီအစဉ် ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အခန်းတွင်းသင်ခန်းစာများနှင့် ကျောင်းတက်ချိန်များကို မိမိ၏ အားလပ်သည့်အချိန်များနှင့် ညှိယူပြီး သင်ယူနိူင်ပါသည်။
နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ကျင်းပမြဲဖြစ်သော Bible Crusades များနှင့် ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များ မိဿဟာယ အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ပြီး မိမိ၏စွမ်းရည်များနှင့် ဗဟုသုတများကို လက်တွေ့ကျကျ အသုံးချနိူင်မည့်အပြင် မိမိ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာအမြင် ကျယ်ပြန့်နိုင်ရန်အတွက် အချင်းချင်း စိတ်နှလုံးသားဖလှယ်ပြီး မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ တိကျနက်နဲသော သမ္မာကျမ်းစာပို့ချခြင်း နှင့် အခြားမြောက်မြားလှစွာသော အစီအစဉ်များပါဝင်ပါသည်။
ကျမ်းစာသင်ကြားရာတွင် သင်တန်းသားများ လက်လှမ်းမီနိုင်မည့် သင်တန်းကြေးဖြင့် သင်တန်းကာလ ၂နှစ် ( စာသင်နှစ်ဝက် ၄ခု) စီစဉ်ထားရှိပေးပါသည်။
မေး) အွန်လိုင်းသင်တန်း ဘယ်လို တက်ရမလဲ?
မေး) သင်တန်းပြီးဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ?
မေး) အွန်လိုင်း ကျမ်းစာလေ့လာ သင်ယူခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးသည် မည်သည်နည်း။
မေး) ပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။
မေး) ပို့ချချက်များ ကြည့်ရှုရန် အချိန်ကန့် သတ်ချက် ရှိပါ သလား။
Good News Online ကျမ်းစာကျောင်းမှ သမ္မာကျမ်းစာသင်ယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို ပိုမို ခိုင်ခံ့နက်နဲစေပြီး ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေလည်း ပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကျောင်းက ကျွန်တော့်ရဲ့
ရှေးရိုးစွဲအသိနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာကို သိခဲ့တဲ့အရာကို ပြုပြင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် နောက်ပိုင်း နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောပို့ချ
တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့ ပြောနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတဲ့သူတိုင်းကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။